जीन्स र टी-शर्टको साथ अनौपचारिक शैलीहरू शहर भ्रमण गर्न बेजिया
मारिया vazquez | 03/05/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
जीन्स एक महान सहयोगी हो जब आकस्मिक पोशाकहरू सिर्जना गर्नुहोस् यो बारेमा छ। प्राय: हामी सबैको कम्तिमा पनि एउटा जोडी जीन्स हाम्रो वार्डरोबमा छ, र ती मध्ये एउटा जोडी सधैं हुन्छ जुन हामी शर्त लगाउँदछौं जब हामी अधिकतम सान्त्वना खोज्दै छौं।
ती संग जीन्स जसले तपाईंलाई सहज महसुस गराउँदछ, सबै तहमा, तपाईं आज हामी प्रस्तावित कुनै पनि शैलीहरू पुन: सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। ती दिनहरूको लागि उत्तम शैलीहरू जब हामी योजनाबिना घर छोड्छौं वा जब हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले शहरको एक ठूलो अंश यात्रा गर्नुपर्नेछ।
र यदि हामी सुधारित योजनाहरू र लामो पैदल यात्राको बारेमा कुरा गर्छौं, कुनै सहयोगीले केही भन्दा बढि सान्त्वना प्रदान गर्दैन टी-शर्ट वा खेलका जुत्ताहरू। अब यदि हामीसँग पहिले नै हाम्रो स्टाइल तयार छ। तपाईले गर्नु पर्ने भनेको सही टप्सहरू छनौट गर्नु हो।
वसन्त मा शर्ट वा आधारभूत टी-शर्ट तिनीहरू एक ठूलो विकल्प हुन्छन्। सेतो शर्ट भनेको आधारभूत हो जुन हामी दुबै आकस्मिक पोशाकहरूमा समाहित गर्न सक्दछौं जुन कि आज हामी बनाइरहेका छौं साथै अन्य औपचारिक पनि। यदि तपाइँ शर्टमा शर्त लगाउनुहुन्छ भने, सेतो वा कालोमा एउटा को लागी साधारण पोशाकहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईं कहिल्यै थाक्नुहुन्न।
ती सुन्दर बिहान वा रातहरूको लागि, छनौट गर्नुहोस् ब्लेजर वा छोटो ज्याकेट चिसो संग लड्न मद्दत गर्न। यदि तपाईं सामान्य कपडाको लागि सामान्य हेराई सिर्जना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, ज्याकेट र शर्टको बीचमा रुचि थप्नको लागि रंग कन्ट्रास्टहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
आधारभूत कपडाहरूको बारे बिर्सनुहोस् यदि तपाईं तपाईंको आउटफिट्सको एक विशिष्ट तत्वमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने। एक मुद्रित शीर्ष वा ट्रेंडिंग विवरणहरू सहित ओभरसाइज कलरहरू वा ठूलो आस्तीनहरू यसले सबैको आँखा यसमा एक बनाउने बनाउँछ।
के तपाईं पनि अक्सर जीन्स र समुद्री तटको संयोजनको उपयोग कोजुअल आउटफिटहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » जीन्स र टी-शर्टको साथ अनौपचारिक शैलीहरू शहर भ्रमण गर्न